Eyona Icocekileyo yevili leMoto-buyisela ukuRhaxwa kweyona gloss yoqobo.
Ikhaya / iimveliso / I-Car Wheel Cleaner
I-Rim ephezulu kakhulu ye-Rim Cleaner
Ngokukhawuleza isusa i-grime kwaye iphule ingcolile! Leliphi icandelo lemoto elilelona llizwi lililo? Isondo sakho! Phakathi kobushushu, imozulu embi kunye nokungqubana kokuphinda kuqubuke amavili amavili akho phantse kube kungcolile. I-OPS Rim yokucoca icocwe kakuhle ipowder-ecocekileyo yokucoca i-poda ukujolisa uthuli olunobunzima kwaye ishiye amavili akho engenabala. Geza, sula kwaye ubuyisele ityhubhu yakho kwi-gloss yentsusa! Siyazingca ngenkonzo yabathengi kunye nolwaneliseko kwaye sikholelwa ukuba isiCoci seRim Cleaner siyinto efanelekileyo kwimarike.
♣ I-OPS yevili kunye nabaCoci beTire
♣ 500g powder, epakishwe ngesikhwama seplastiki okanye kwibhokisi yeplastiki.
♣ Kufanelekile ukucoca izithuthi ezahlukeneyo.
♣ Phunyelela ngaphakathi kwendawo yokungcola, ngokukhawuleza uchithe.
I-Rim ecocekileyo, inkonzo ye-OEM / i-ODM, iRaily.
Kufuneka usebenzise iCar Rim Cleaner.
Uyazi yonke le mibuzo? Kunzima ukuhlambulula amatye anenkani, ukungcola kweoli, inkunkuma yesinyithi, isondo eliphuzi, ukuzaliswa ngothuli, i-oxidized and lacklesster kunye ne-agent engcolileyo yokucoca. Isithuthi esivuthayo sevili singenza isithuthi esiqhelekileyo, esetyenzisiweyo sivele sitsha. Kwaye kunye nje ixesha elifutshane kunye sebenzisa imveliso yokucoca, indlela efanelekileyo, ngoko uyakwazi ukuthatha isondo lakho ukuya kumgangatho ongcono. Uthuli lwe-Brake, into enobungozi obangelwa ukutshatyalaliswa nanini na xa usebenzisa i-brakes, iyonakalisa kakhulu kwaye ingabangela ukulimala ngokusisigxina xa ithe yahamba kwi-wheel hub eside kakhulu. Yingakho kufuneka uhlambulule iivili zakho rhoqo kubaluleke kakhulu.
Indlela yokuhlambulula uthuli olususwe ngamavili e-chrome? Ubuncinane kufuneka kube nokutshabalalisa ngokukhawuleza, ukukwazi ukuhlaziya ngamandla kwaye ungalimazi ivili!
Kutheni kuthiwa yiyona nto ibhetele I-Wheel neTire Cleaners?
Siphakamise uphando, iteknoloji yophuhliso, abanye abasebenzi bezesayensi ukuphuhlisa iimveliso ezintsha ngonyaka. Wethu ukujikeleza kwesondo iqukethe izinto ezinamandla zokuqhawula, i-acid-free kunye ne-pH ye-formula engekho nto leyo inokungena ngokukhawuleza ukungcola kwaye ikhuphe emthonjeni kwaye yenza ivili lokucoca ixesha lifutshane kakhulu! Uninzi lwamavili ococekileyo lunokonakaliswa ekupheleni kwevili kunye nokutshabalalisa ngaphezu kokufunayo ukucoca! I-OPS yokujikeleza isondo lokujikeleza isondo iya kusebenza ngokukhawuleza kwaye idibanise ukungcola kwensimbi.
Ngokungafani nomzimba wemoto, izibonda zayo zivezwe kwezinye zeemeko ezinzima kakhulu apho. Sijonge iindlela zokuhambisa ixabiso kwaye ufumane umsebenzi
kwenziwe ngokufanelekileyo kubaxhasi bethu. Umtya, ukutshatyalaza ukucoca ukucoceka ngenye yeendlela zokucocela ngevili, kwaye sifuna ukuba ufumane into enokuyenza ngayo. Ukucoca iivili ezinqwelo-moya akumele kube nzima! Mxube nje ngamanzi, uze uyisebenzise kumavili akho angcolileyo.
♦ Ukuqhawuleka ngokukhawuleza kwaye i-foam ininzi.
♦ Iqulethe izinto ezinamandla zokuhlaselwa, ezinokutshabalalisa ngokukhawuleza amatye.
♦ Iqukethe into ekhanyayo, ukhusela ngokugcwele ukhuseleko lwevili, ukusetyenziswa kwexesha elide le mveliso kunakho yenza ukuba isondo sakho sithuthi sithobe njengento entsha.
♦ Ukhuseleko lwe-chrome uhlambulukile, ulula, ungathathi nantoni na yezandla zakho.
♦ Nokuba imeko yemoto imdaka kakhulu, sisiqwengana sekhekhe se-OPS esineemfanelo zesicoci samavili!
Iimpawu ze-OPS ezizenzele iToiler eziCociweyo:
♦ Ukungena ngokukhawuleza
Ucebile ekucoceni ion kunye nokukwazi ukungena ngokujulile ukubola ukungcola.
♦ Ucoceke njengolutsha
Ukuphucula imimangaliso ebumnyama, engabonakaliyo kunye nezinye izinto ze-wheel hub, ubuyisele kwi-gloss yasekuqaleni.
Uluhlu olukhuselekileyo lukhuselo luyakhiwa ukuze kuthintele umonakalo onjengothutho, ukuguguleka komhlaba kunye ne-oxidation.
♦ Ukuqhawula ngokukhawuleza
♦ Ukhuseleko kunye nobume bendawo
Kuyafaneleka kwiindawo ezahlukahlukeneyo zevili, i-biodegradable kunye ne-free of substances engozi.
Ungayisusa njani ukungcola kwiirim ze-aluminium?
1. Thela i-2-3 ipoyiji yepuniyiyi powder kwi-barrel, kucetyiswa ukuba uthele i-powder kuqala uze uthele amanzi.
2. Phalaza i-foam amanzi phezu kwe-hub uze uvumele amanzi ahlale kwindandatho yensimbi imizuzu embalwa ngaphambi kokutshiza
kunye nezixhobo ezinjenge siponji njl. Ingubo yokucoca ihayi kunye ne-chrome ehlambulukileyo, i-spray cleaner
kwisikhululo se-carwash. Kukulungele ngakumbi ukusebenza!
3. Gcoba ngamanzi acocekileyo. (Okanye ukuhlanjululwa ngokuthe ngqo ngophethi ophezulu)
4. Ekugqibeleni, susula ngengubo.
Ungayisusa njani i-caked kwi-grease kwi-injini?
Sikwabonelela nge-Degreaser ye-Injini efanelekileyo, yenziwa ngefomula yokucoca ebomvu.
Bonisa i-injini yakho yobuchule ekucoceni apha ngezantsi:
Ucinga ntoni malunga nezinto zokucoca iimoto ze-OPS? Ulwazi oluthe kratya, nceda Qhagamshelana nathi.
Iphepha le-Car Wheel Cleaner Specifications Sheet
I-OPS yensimbi yentsimbi yokucoca
Umkhiqizo ocacileyo. 500g / 1 Bag
Price US $ 2.20 / Bag (FOB Ningbo / Shanghai)
Ixesha lokuqinisekisa I-3-5 iminyaka
MOQ I-1 MT (iibhegi ze-2000)
Umhla wokuzisa Kwiintsuku ze15.
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha Iloliwe.